တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်(ဒရုန်း)စမ်းသပ်ပျံရေး အခြေစိုက်စခန်း တာဝန်ထမ်းဆောင် - Xinhua News Agency
ရှီးအန်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဆန်ရှီးပြည်နယ် Jingbian ကောင်တီရှိ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ (ဒရုန်း)အတွက် ပထမဆုံး ပညာရပ်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု အခြေစိုက်စခန်းသည်လုပ်ငန်းတာဝန်များ စတင်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ကာ နိုင်ငံ၏ UAV လုပ်ငန်းကွင်းဆက်၌ လစ်ဟာမှုကို ဖြည့်တင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါ စမ်းသပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းသည် အမျိုးသား UAV လုပ်ငန်း ဘက်စုံသရုပ်ပြဧရိယာနှင့် ပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း တစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားသည်။
Jingbian အထွေထွေလေကြောင်းလုပ်ငန်းလေဆိပ်ဟု လူသိများသော အခြေစိုက်စခန်း တည်ဆောက်မှုအား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ UAV ဒရုန်းစမ်းသပ်ပျံသန်းမှု အသားပေးထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး လေဆိပ်သည် ဧရိယာ ၅,၀၆၃ mu (၃၃၇.၅ ဟက်တာ) ရှိပြီး စမ်းသပ်ပျံသန်းနိုင်သည့်လေပိုင်နက် ၅,၀၀၀ ကီလိုမီတာနှင့် ပြေးလမ်း ၂,၄၀၀ မီတာရှည်လျားကာ အကျယ်အားဖြင့် ၄၅ မီတာရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းလေဆိပ်သည် လေကြောင်းအာဏာပိုင်၏ စစ်ဆေးမှုကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ပြီး လေဆိပ် အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်လည်း ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် လုပ်ငန်းအပြည့်အဝလည်ပတ်နေပြီဖြစ်သည်။
၎င်းအခြေစိုက်စခန်းတွင် UAV သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လေကြောင်းပျံသန်းနိုင်ခြေရှိမရှိ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ခင်းကျင်းပြသခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးများအပြင် UAV လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ထမ်းများ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ကွန်ဖရင့်နှင့် ပြပွဲများအတွက် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
UAV လေကြောင်းအခြေစိုက်စခန်း တာဝန်ယူထားသူနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်သူလည်းဖြစ်သူ UAV Research Institute of Northwestern Polytechnical တက္ကသိုလ်က ၎င်းအခြေစိုက်စခန်းအား ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ UAV စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပျံသန်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုစင်တာအဖြစ် တိုးတက်လာစေရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သုတေသနအင်စတီကျုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ကတိပြုထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China’s first drone test base commissioned
As the undertaker and operator of the UAV airbase, the UAV Research Institute of Northwestern Polytechnical University has vowed to cooperate extensively with enterprises, public institutions and research institutes in the industry to develop the base intoaworld-class UAV test and flight service center. Enditem
Photo : A drone carryingapackage arrives atagoods delivery landing site in Xi’an, capital of northwest China’s Shaanxi Province, June 20, 2017. Delivering goods to terminal customers through drones has been normalized by Chinese e-commerce trader JD.com since June 18, 2017 in Xi’an. (Xinhua/Shao Rui)